SpyHunter.4.15.1.4270 Full With Patch ~ လမင်းတရာ
IN Antispyware, Antivirus - ON 1:36 PM No comments
SpyHunter 4.15.1.4270 | 40.8 MB
ဒီ SpyHunter 4.15.1.4270 ကတော့ တချို့နာမည်ကြီး Antivirus တွေက မနိုင်တဲ့ စက်ကိုလေးစေတဲ့ Virus,spyware,adware,keylogger,trojans,worms စ တာတွေကို ရှင်းတဲ့ Software လေးပါ Facebook ကလာတဲ့ Spyware , Malware တွေ ပြီးတော့ Hidden ဖြစ်နေတဲ့ Keylogger ကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုထားတာကြောင့် အင်တာနက်ဆိုင်မှာ သွားသုံးနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ပိုပြီးအသုံးဝင်စေမှာပါ.လိုအပ်သူများအောက်မှာယူသွားလိုက်ပါဗျာ..
SpyHunter –aprogram to clean your system from spyware, keyloggers, memory-resident viruses, as appropriate deletes cookies, registry entries left behind by spyware. Checks the running processes, registry keys, elements of ActiveX. It hasavery user-friendly interface, through which, as easy to use, and impressive signature database will not allow any spy go unnoticed.
Homepage – http://www.enigmasoftware.com